प्रहरी भन्छ– मन्त्रीकै फोन आउँछ त, के गर्नु ? – Jagaran Nepal
प्रहरी भन्छ– मन्त्रीकै फोन आउँछ त, के गर्नु ?
काठमाडौं, सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो गरी नाकाहरुमा क’डाइ गरिएको बताइरहँदा उपत्यका भित्रिनेको संख्या भने बढेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यकामा आउनेको संख्या बढेपछि त्यसको द’बाब प्रहरीलाई परेको छ। प्रहरीले पास बोकेर आएका बाहेकलाई नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको दा’बी गर्दै आएको छ। तर नाकाहरुमा अवलोकन गर्दा भने अवस्था बेग्लै छ। शुक्रबार नागरिककर्मी थानकोट नाका क्षेत्र पुग्दा भनसुनका आधारमा उपत्यका छिर्नेको भी’ड नै देखियो। सरकारले प्रहरीलाई क’डाइ गर्न भनेपनि दबाबमा परेर केहीलाई छा’ड्ने गरिएको नाकामा खटिएका प्रहरीले नै बताए।
‘हामीले सकेसम्म क’डाइ गर्छौं तर मन्त्रीकै फोन आउँछ त,अनि के गर्नु,’ महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका एक प्रहरीले भने, ‘प्रहरीले चाहेर मात्रै क’डाइ हुँदैन।’ प्रहरीले ज’थाभावी सवारीसाधन र यात्रुलाई उपत्यकामा प्रवेश गर्न दिएपछि यातायातकर्मीले पनि वि’रोध गरेका छन्। यातायातकर्मी रामबहादुर थापाले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीम ढकालले आफूखुसी सवारीसाधन छाड्ने गरेको बताए। उनले आफू नाकाहरुमा उपस्थित भएर अवलोकन गर्दापनि एसएसपी ढकालले कैयौं यात्रु छाडेको र छाड्न आदेश दिने गरेको दा’बी गरे।
‘मैले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु तर अहिले ट्राफिक प्रहरीले आफूखुसी सवारीसाधन उपत्यकामा प्रवेश गराएको छ, यसले झन् महामारी फै’लने ड’र छ। प्रहरीले आफूखुसी यात्रुहरुलाई नाकाबाट प्रवेश गर्न दिएको प्रमाण मसँग छ,’ उनले भने। उनले नाकाहरुमा उपस्थित भएर हेर्दा चे’कजाचमा पनि क’डाइ नभएको बताए। सुरुसुरुमा क’डाइ गरेपनि पछिल्लो समय थ’र्मलगनले ज्वरोसमेत न’नापी उपत्यकामा मानिसलाई प्र’वेश गर्न दिइएको उनको भनाइ छ। ‘हुनत प्रहरीको पनि आफ्नो स’मस्या होला तर भनसुन र पैसाको लो’भका यस्तोबेला उपत्यकामा ज’थाभावी प्रवेश गर्न दिनुहुन्न,’ थापाले भने।
यसरी ज’थाभावी प्रवेश दिँदा उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जो’खिम ब’ढेको उनले बताए। महाशाखामा एसएसपी भीम ढकालले सक्दो क’डाइ गरेको दा’बी गरे। उनले जथाभावी ओहोरदोहोर गर्न पूर्ण रोक लगाइएको बताए। ‘हामीले बि’नाकाम हिँड्नेलाई छाडेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अनुमान गरेर यसोउसो भन्न मिल्दैन।’ उनका अनुसार लकडाउन अ’वधिमा प्रहरीले २५ सय सवारीसाधन नाकाबाट फिर्ता पठाएको छ। शनिबार पनि ८० वटाभन्दा बढी सवारीसाधन र २ सय यात्रुलाई विभिन्न नाकाबाट फिर्ता पठाइएको उनले दा’बी गरे। नागरिक